Izindaba - Buyela kusexwayiso sethrendi yombala wezemidlalo eyiqiniso
Buyela kusexwayiso sethrendi yombala wezemidlalo weqiniso
Umthelela wezindawo ezahlukahlukene zenhlalo kanye nesilingo sazo zonke izinhlobo zezinto zihlala zisebenzisa umongo wempilo, futhi ziheha nemvelo elula elula. "Ukubuyela eqinisweni" kusho ukubuyisela isimilo nempilo ebumsulwa. Lapho imvelo yomhlaba, impilo yomuntu kanye ne-xinxing konke kubuyela esigabeni sokuqala, futhi bezwa kahle izinto ezinhle ezikuzungezile, basuse ubunzima obedlulele futhi babuyela kokuyikho, impilo izothola okukhulu. Imibala esemqoka yezingubo zemidlalo zasekwindla nasebusika ezingama-22/23 zikhishwa ezintweni ezinhle empilweni nasemvelweni. I-color psychology inethonya kubathengi abaphishekela ithemba nokulinganisela impilo nemvelo, okuletha amandla amahle nomuzwa wokuphepha. Ngakho-ke, imibala yemvelo egcwele kakhulu ekhombisa amandla amahle iyisici esiyinhloko, imibala engathathi hlangothi ekhulisa ukuzinza nokuphulukiswa iletha umuzwa wokuvikeleka, kuyilapho imibala egqamile yokugcwala okuncane inikeza umphumela wezengqondo ohlanzekile, ophephile futhi oqabulayo. Uma kuqhathaniswa nezinkathi ezedlule, isondo lemibala lilonke linokuqina, futhi ukubonakaliswa kwethemba kunamandla ngenkathi umbala ungalahleki.
Umbala omhlophe ongagqamile uvela empilweni, futhi umbala ongathathi hlangothi obuyela emvelweni awunamabala futhi uyiqiniso, uletha umuzwa wokuzinza nokuphulukiswa. Ukwakheka okubucayi kodonga kuletha ugqozi ekugoqeni okuthambile. I-hue isithuthukile, ilula, iyasebenza, ihlala isikhathi eside, futhi ingasetshenziswa kuzo zonke izinkathi zonyaka.
Okungaxhunywanga ezingutsheni zemidlalo zasekwindla nasebusika ezingama-22/23 ukukhombisa umphumela wokuphulukiswa okuphephile, ukugoqwa okuncane, indwangu eboshiwe enganamathele kanye nendwangu yoboya eyimbudumbudu ehlanganiswe nokuthungwa, efanelekile ezemidlalo yesimo sezulu sonke nokuqina komzimba; ngasikhathi sinye, okumhlophe okungabunjiwe nakho kungahlanganiswa nemfashini Uhlobo lwebhizinisi lungaba yimishini enhle yehhovisi elinethezekile.
I-Glow Blue ikhombisa umuzwa wokuphola nobuchwepheshe, iletha impilo, ukuphepha, nenhlanzeko imiphumela yengqondo, futhi yehlisa imizwa. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka amathoni ayisihluthulelo wephalethi yombala wesizini entsha, okuthuthukisa ukukhanya okuphelele kombono wombala futhi kwenza ushintsho phakathi kwemibala luqondaniswe kangcono. I-Glow Blue yesizini entsha ingeza ukwakheka okunethezeka futhi okubanzi, ukusetshenziswa kombala omkhulu nenguqulo ekwazi ukuyihumusha.
Ukuvutha okwesibhakabhaka kungumbala obalulekile wokuvumelana. Ukuyisebenzisa kanjani kuyisihluthulelo. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kungumbala omkhulu, kushiya ukwakheka okunzima kakhulu okunemininingwane, futhi kusetshenziswa inguqulo emfushane ukwenza ukwakheka kombala ogcwele umzimba, kudale ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okupholile nokupholile. Umqondo wombala. Lo mbala ulungele ukungcebeleka emadolobheni, ukuqina kwangaphakathi nokusetshenziswa kwangaphandle kwemfashini ngezitayela nezitayela ezahlukahlukene, futhi i-hue inamandla.
Ngaphansi kwengqikimba ethi "buyela eqinisweni" ekwindla nasebusika ngomhla ka-22/23, imibala engathathi hlangothi enokugcwala okuphansi nokukhanya okuphakathi iphakanyisiwe njengemibala esebenzayo neqinile, engasetshenziswa kwizigcawu nezinkathi eziningi; ugqozi luvela emsini empilweni yangempela, futhi ngasikhathi sinye lufaka ukuthungwa kwethoni elifudumele lwomsizi. Umbala ongathathi hlangothi ngomuzwa wokuvikeleka uvela emzimbeni ogcwele, ungeza ukuthinta kokukhanya okukhanyayo kokungenambala, okwenza abantu bazizwe bezolile futhi belulame.
Ukugqama maphakathi nendawo nokugcwala okuncane okushunqayo okumpunga kunesikhundla esingabuyiseki ngaphansi kwendikimba ethi “buyela eqinisweni” ekwindla nasebusika ngomhlaka 22/23. Noma ngabe isetshenziselwa amasudi angavamile noma amajezi entofontofo futhi engasindi phansi, kuhlanganiswe nezindwangu ezilungele isikhumba, kukhombisa intuthu uqobo Izimpawu zombala womoya ongathathi hlangothi ohlukile. Isitayela esinemisebenzi ehlukahlukene singalawula noma yikuphi ukugqoka nsuku zonke.
Uluhlaza olujulile lwechibi luthathwe emvelweni, lubonisa umuzwa wokuvikelwa kwemvelo ekwindla nasebusika ngomhlaka 22/23. Itholakala ezintabeni zamaminerali namachibi we-abyssal ekujuleni kwemvelo. Ukubalekela idolobha ukuze uzwe ubuhle bemvelo, ulethe umuzwa wokuba yize futhi ubalekele emhlabeni; isizini entsha iluhlaza Izwakalisa umuzwa wombala wokugcwala okuphezulu, ikhombisa amandla emvelo omhlaba, futhi ingeza imfashini kwezemidlalo, iba ngumbala wemfashini nemfashini ngenkathi yenguqu yasekwindla nasebusika.
I-deep and tranquil deep echibini eliluhlaza kufanelekile njengombala oyinhloko, ofanele ezemidlalo yasemadolobheni nokungcebeleka, ezemidlalo zangaphandle, ukuqina kwangaphakathi nezinye izitayela zezemidlalo. Umklamo wekephethi wokuvikela ukhololo ophakeme uveza umphumela wokuvikela, uhlanganiswe namaphakethe womoya asebenzayo neminye imiklamo eningiliziwe yokukhombisa imfashini Kwangaphandle okusha, ukuphrinta kwemfashini okwehlukile kuhlangene nomdwebo we-windbreaker owenziwe ngemfashini wethula imfashini yomgwaqo entsha; kusukela emgwaqweni uye ngaphandle nangaphandle nezinye izigcawu eziningi, okuluhlaza okwemvelo okujulile okuluhlaza kufanelekile.
Umbala wesibabule samaminerali uthathwe kwi-ore sulfur yemvelo. Umbala wokugcwala kombala wokugcwala usikisela ukuzinza kwekwindla nobusika. Ukucwebezela okuncane kwezimayini zesibabule namathini kugcwalisa umbala ofudumele wesibabule. Ngenkathi ikhombisa injabulo nomzwelo, ingeza isimo semfashini kwezemidlalo, iba umbala wemfashini nemfashini ekwindla nasebusika.
Umbala ofudumele nemfashini wamaminerali wesibabule ufanelekile njengombala oyinhloko, osetshenziselwa ukuzilibazisa kwezemidlalo yasemadolobheni kanye nezitayela zezemidlalo zangaphandle, noma njengokuhlobisa kombala wesibili kuhlanganiswe nezitayela zokuqina zasendlini zasendlini, futhi kuyimfashini; inhlanganisela yendwangu ejiyile ebanzi futhi ebanzi I-micro-city silkette elungele ukugqoka iletha ukunyakaza kwasemadolobheni okuyimfashini. Indwangu yokuzikhethela engasindi futhi entofontofo ingasetshenziswa njengengqimba engaphezulu, kuhlanganiswe nenguqulo yezemidlalo evulekile, ukunikeza induduzo nokusebenza kwayo yonke imidlalo yezulu nokuzilibazisa. Idizayini yokusebenza kokushayisa komoya nemininingwane yentamo ephezulu ehlanganiswe nomoya ihlangene nezindwangu ezingangenwa manzi zangaphandle ukwethula isitayela sangaphandle semfashini. Ukusuka edolobheni kuye entabeni nezinye izigcawu, umbala wesibabule wamaminerali ufanelekile.
Ngaphansi kwengqikimba ethi "Buyela kuQiniso", ubumsulwa bewolintshi elikhanyayo bancishiswa kancane, ngokukhonjiswa kwethoni elimnyama nokuthungwa okuzolile, i-hue iveza umthelela omncane we-retro, engeza ubungqabavu be-retro esimweni esibuhlungu sekwindla nobusika, futhi ukuletha ithemba kule timu. Ukusetshenziswa kwezingubo zezemidlalo kuvezwa ikakhulu kumbala omkhulu, kuhlotshiswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukukhulisa umqondo we-retro.
Ukusebenza okuyinhloko kwe-orenji e-retro egqamile yesizini entsha kusetshenziswa njengombala oyinhloko endaweni enkulu, futhi ukuhlobiswa kwemibala ehlukile engafani kunanela umuzwa we-retro wombala; kuhlanganiswe nendwangu engangenwa ngamanzi futhi engenawo umoya enokuthungwa okubanzi, inikeza ukusebenza kwangaphandle okuyimfashini futhi ingasetshenziswa njengemibala ehambisanayo Hlanganisa ubuciko obungafani nobuningi bokukhombisa ukuthungwa kwemfashini. I-Retro Vibrant Orange ilungele ukusetshenziswa kwezokungcebeleka zasemadolobheni, izitayela zangaphandle zemfashini nezemidlalo nezitayela zokungcebeleka.
Isihloko esithi "Buyela eQinisweni" sigxile ebumsulwa nakwemvelo. I-lapis lazuli egcwele okwesibhakabhaka ohlelweni lombala omnyama ikhishwa kwi-lapis lazuli yemvelo, futhi kufakwa ungqimba wesihlungi esimpunga, esithambile futhi esilula, esinika abantu umuzwa wokuzola nowokuqala. Ngemuva kwesikhathi sokuphumula, i-lapis lazuli blue ivela endaweni enkulu, futhi ukuthungwa kwendwangu kungazanywa ukufaka izinto ezicashile ezicwebezelayo, eziyimfihlakalo, ezibekelwe imfashini.
Kule sizini, i-lapis lazuli blue ithule ngokwengeziwe futhi ibekelwe imingcele, futhi futhi ingenye yemibala ebalulekile yemikhuba ekwindla nasebusika ka-22/23. Indwangu yokunethezeka ye-velvet noma indwangu ye-acetate enokukhanya okucwebezelayo ithuthukisa amandla okucacisa we-lapis lazuli blue, kuhlanganiswe namajezi anemfashini ajwayelekile, amabhulukwe angavamile nezinye izinto ukuveza umqondo wemfashini wezemidlalo yasemadolobheni. I-lapis lazuli blue ifaka kakhulu futhi ingasetshenziswa kumajakhethi ebaseball amaphakathi ashubile aphakathi nendawo noma amajakethi asebenzayo ajwayelekile, futhi ingasetshenziswa ezingutsheni zemidlalo ehlukahlukene ukwenza ngcono ukusebenziseka.
Ngaphansi kwengqikimba ethi "Buyela eQinisweni", onsomi omnyama okhiwane ukhishwa njengomunye wemibala yokuthambekela kwephalethi. Itholakala ekukhuleni kwemvelo kwamakhiwane. Umbala wangempela, kepha ngasikhathi sinye ukhombisa ukuthungwa okwenziwe, ngakho-ke inakho kokubili online kanye nolayini. Ngaphansi kokuheha, lolu hlobo lwenoveli nombala wemfashini kufanelekile ukuzama ukuthuthuka.
Umbala onsomi womkhiwane ojulile futhi oyimfashini ufanelekile njengombala oyinhloko wamasudi ezokungcebeleka asezindaweni zasemadolobheni nokuqina kwangaphakathi endlini nezinye izitayela zezemidlalo. Izindwangu zesikhumba ezikhanyayo zisetshenziswa ekwakhiweni kwesitayela ukwandisa ukuthungwa kwemfashini. Ngasikhathi sinye, ingasetshenziswa ngamaphethini wokusetshenziswa komzimba okugcwele, ehlakaniphile nemfashini; Umdlalo wonke ulungele izitayela ezahlukahlukene zezinto ngaphansi kwezemidlalo yasemadolobheni.